Xiisadda Al-Aqsa Oo Sii Xumaatay, Yuhuudda Oo Markale Weerartay Xalay - Axadle » Axadle Wararka Maanta
Xiisadda Al-Aqsa oo sii xumaatay, Yuhuudda oo markale weerartay xalay – Axadle
Qudus (Reuters) – Dibadbaxayaasha iyo ciidamada Yuhuuda ayaa xalay mar kale ku dagaalamay banaanka hore ee masaajidka barakaysan ee al-Sharif ee magaalada Qudus, iyadoo kumanaan salaadood lagu tukaday masaajidka al-Qasa, ee ku yaal gudaha iyo banaanka mowlaca.
Dhallinyaro Falastiiniyiin ah ayaa dhagxaan ku tuuraya ciidamada Yuhuuda ee dhufeysyada ka sameysanaya masaajidka iyagoo isku dayaya inay iska celiyaan qaar ka mid ah shacabka.
Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadaha, oo ay ku jiraan carruur ay da’doodu ka yar tahay hal sano, 14 ka mid ah ay ku jireen isbitaal, sida laga soo xigtay Bisha Cas ee Falastiin.
“Ma doonayaan inaynu tukano. Maxmuud al-Marbua, oo 27 jir ah, ayaa yiri “maalin kasta waxaa dhaca dagaallo iyo isku dhacyo,” iridda laga galo Haram al-Sharif ee Dimishiq, isagoo farta ku fiiqaya booliska Yuhuudda Bal eeg, way na tooganayaan, ayuu yidhi.
Xiisadda Al-Aqsa ayaa la qabtay bisha Ramadaan oo dhan, in kasta oo ay jirto arrimo adag oo ka dhashay qorshaha dadka Falastiiniyiinta ah ee ah in la sii daayo guryaha ku yaal magaalada Qudus, sida Yuhuuddu sheegato.
Ugu yaraan 205 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska horimaad cusub oo dhacay Jimcihii, kaasoo dhaliyay kacdoon adduunka oo dhan ka dhan ah Yuhuudda.
Iska hor imaadyada ayaa habeen kasta ka dhaca Bariga magaalada Qudus, gaar ahaan degmada Sheekh Jarraax, halkaas oo ay Yuhuudu damacsan tahay inay xoog ku raraan qoysaska reer Falastiin si ay u dajiyaan Yuhuudda.
Koox ka kooban afar dhexdhexaadiye oo ka socda Bariga Dhexe, oo ka kooban Mareykanka, Ruushka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay, ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha iyo suurtagalnimada masaafurinta.
“Waxaan ka codsaneynaa maamulka Israel inay is xakameeyaan oo ay ka fogaadaan talaabo kasta oo xaalada ka sii dari karta inta lagu jiro maalmaha barakeysan,” ayaa lagu yiri bayaan.
Xiisadaha ayaa lafilayaa inay sii kordhaan maalmaha soo socda, waxaana maxkamada sare ee Isra’iil ay bilaabi doontaa dhageysiga Isniinta dacwada dadka doonaya in laga saaro deegaanka Sheikh Jarrah.